ငွေလရောင်ရဲ့တိမ်းရှောင်သူ (သစ်ကောင်းအိမ်) – ရှုခင်းသစ် NEW SIGHTS
Posted on January 19, 2015 February 6, 2015 EditorPosted in ရသရှုခင်း, အက်ဆေး
ကျနော့်အမေ ကွန်မြူနစ် ဖြစ်သွားရခြင်းအကြောင်းကုို ပြန်လည်တွေးမိတော့… တယောက်တည်းပြုံးရယ်ချင်စိတ်နဲ့အတူ အတိတ်ထဲကနေ၍ … မျက်တွင်းများ၊ ပါးရုိုး နားရုိုးများချိုင့်ဝင်လျက် ရီဝေဝေကြောင်စီစီမျက်လုံးများ မုတ်ဆိတ်ကျိုးကျဲ ဆီနဲ့ဝေးသောဆံပင်ခွေလိပ်လိပ်များးနှင့် ကျောပြင်တခုလုံးပေါက်ပြဲနေသော အင်္ကျီနွမ်းတထည်ကို ဝတ်ဆင်ထားသောလူတယောက်။
တခါတရံတွင် သတင်းစာတစောင်ကုို ကုိုင်လျက်၊
တခါတရံတွင် ပုတီးတကုံးကုို လက်ထဲတွင်စိတ်လျက်၊
ထိုသုို့မှမဟုတ်လျှင် စာအုပ်တအုပ်ကုို ကုိုင်လျက်
ကျနော်တုို့ အိမ်မျက်စောင်းထုိုး လက်ဘက်ရည်ဆုိုင်ဘက်မှနေပြီး
ကျနော်တုို့ အိမ်ရှိရာဘက်ခြမ်းကုို လမ်းဖြတ်ကူးလာသည်ကုို
ထုိုသူကား ထုိုနှစ်များမတုိုင်ခင် အချိန်ကာလတခုက ဆင်းရဲသောမိဘ၏ စာတော်သောကျောင်းသား ။ သူတုို့ခေတ်ကာလ တက္ကသုိုလ်ကျောင်းက ငွေလမင်းတုို့အလယ်က ပျိုတုိုင်းကြိုက်ဂျိမ်းစဒင်း။ စာပေနှံ့စပ်၍ သီချင်းဆုိုလည်းအလွန်ကောင်းသူ စီးပွားရေးတက္ကသုိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားတယောက်။
ကျောင်းဆင်းလာပါက လက်ထပ်ထိမ်းမြားရမည့် စေ့စပ်ပြီးသား ချစ်သူနှင့် ရားထူးနေရာ တခုကလည်း အဆင်သင့်။
သုို့သော် သူကံကြမ္မာ ငွေလရောင်က သူ့၏ နုနယ်ပျိုမြစ်သော ပြည့်လုပြည့်ခင် ညကုိုတိမ်းဖယ်ရှောင်ခွာခံရကာ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်အရောက်တွင် စိတ္တဇရောဂါစွဲကပ်ခံရပြီး ကျနော်တုို့မြို့လေးသုို့ ထုိုသူပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။
ကျနော်တုို့ အရပ်ပြောဒဏ္ဍာရီထဲတွင်မူ သူ့အားတဖက်သတ်စွဲလန်း ချစ်ကြိုက်နေသူ ရှမ်းပြည်ဘက်မှ ရှမ်းမတယောက်က အချစ်လွန်ပြုစားသောကြောင့် သူထုိုရောဂါစွဲကပ်ခဲ့သလုိုလုို စုတ်သပ်ပြောဆုိုကြသော်ငြား သူ့အချစ်ရူးရောဂါလက္ခဏာကား
အရပ်ထဲရှိ ရင်းနှီးသောအိမ်များသုို့ တအိမ်တက်ဆင်း လက်သီးလက်မောင်းတန်းကာ မြန်မာ့ဆုိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဆန့်ကျင်းရေးတရားများကုို ခရားလက်လွှတ်ပြောဆုိုနေထုိုင်ခြင်းပင်။
တုို့တုိုင်းပြည်မှာ တုိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တတ်တဲ့ကောင်ကလည်း တယောက်မှ မရှိ။ ဥပမာ ဖဆဖလခေတ်ကုို ကြည့်ကွာ။ အဲဒီတော့ ငါတုို့ တုိုးတက်တဲ့နုိုင်ငံတခုက အစုိုးရလုပ်တတ်တဲ့သူတွေကုို လစာကောင်းကောင်းပေး ငှားပြီး တုိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခုိုင်းမယ်။ သူတုို့ကောင်းကောင်းမအုပ်ချုပ်တတ်ရင် အစုိုးရအလုပ်က အချိန်မရွေး ဖြုတ်ပစ်ပြီး နောက်ထပ် အရည်အချင်းပြည့်ဝသူကုို ခန့်ထားမယ် ။ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းပဲဟာ ။ အဲလုိုဆုို မကောင်းဘူးလား…
ထုိုသူသည် မနက်လင်းသည်နှင့် ကျနော်တုို့ အိမ်ရှေ့ ရှိ ဦးကျင်သိန်းလဘက်ရည်ဆုိုင်လေးသုို့ ရေနွေးကြိုပြင်ဆင်တုန်းမှာပင် ထုိုနေ့၏ ပထမဆုံးဖောက်သည်အဖြစ် အရင်ဦးဆုံး ရောက်လာကာ သတင်းစာဖတ်ဖုို့စောင့်ရင်း လဘက်ရည်သောက်မည်။
ပြီးပါက ကျနော်တုို့ အိမ်နဘေးက ဖဆပလခေတ် ပမညတအမတ်ဟောင်း အဖေကြီးဦးစိန်မောင် လမ်းလျှောက်ပြန်လာသည့် အရိပ်အယောင်ကုိုမြင်တွေ့ပါက ကျနော်တုို့အိမ်ရှိရာ လမ်းတဖက်ကမ်းသုို့ ကူးလာကာ သူတုို့နှစ်ယောက် မနက်ခင်းရေဒီယုိုနားထောင်လျှင်နားထောင် သုို့မဟုတ်ပါက သူညက နားထောင်ထားသော ညသိပ်သတင်းများ မနက်ခင်းသတင်းစာပါအကြောင်းအရာများကုို အဖေကြီးဦးစိန်မောင်အား သူက ပြောဆုိုဆွေးနွေးမည်။
(ကျနော်တုို့မမွေးခင်ထဲအတီအတေကပင် ကျနော်မိဘများနှင့် အိမ်ချင်းကပ်နေထုိုင်ခဲ့ရာ အဖေကြီးဦးစိန်မောင်ကုို သူ့သားများခေါ်ဝေါ်သည့်အတုိုင်း အဖေကြီးဟုခေါ်၍ သူ့ဇနီးသည်အား မေမေလေးဟု ကျနော်က ခေါ်ဝေါ်ပါသည်။ သူတုို့နှစ်ဦးက သားလေးယောက်မွေးထားပြီး သူ့တုို့၏ အငယ်ဆုံးသားထွေး မျိုးကုိုကုို..ဆုိုလျှင် ကျနော့်အမေနုို့ကုို တယောက်တဖက်သောက်စုို့ရင်း အတူကြီးပြင်းခဲ့ကြရာ ယခု ကျနော်နေထုိုင်ရာ အမေရိကားတောမြို့လေးတွင်လည်း မျိုးကုိုတုို့ မိသားစုနှင့် ကျနော်တုို့မိသားစုသည် ရေစက်ကြီးသူ အိမ်နားနီးချင်းပင်)။
သူအဖေကြီးနှင့် ပြောဆုိုဆွေးနွေးလုို့ ဝလင်ပြီဆုိုလျှင် ကျနော့်အဖေ၏ စက်ဘီးပြင်ဆုိုင်လေး စဖွင့်ပြီဖြစ်ရာ အိမ်ရှေ့တွင် အလုပ်လုပ်နေသော အဖေဆီသုို့ သူကူးလာမည်။ သူ့ဘေးနားလာရပ်သော ထုိုသူ့အရိပ်ကုိုတွေ့ပါက အဖေက မောင်(……) ဘာထူးသေးလဲကွ..ဟု
ခရီးဦးကြိုပြုသည်နှင့် ထုိုသူက သူ၏ သတင်းအနှစ်ချုပ်ကုို မနားတမ်း ထုတ်လွှင့်ကြေငြာမည်။ ကျနော်၏ စိတ်တုို၍ ဘုဂလန့်နုိုင်သော အဖေက သူ့စကားများကုို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နားထောင် ပြီး သူ့ထင်ရာမြင်ရာများကုို ပြန်ပြောမည်။
ထုိုသုို့ အပြန်အလှန်ပြောဆုိုရင်း သူ့အာခြောက်ငြီးငွေစပြုလာသော အချိန်တွင် ကျနော်တုို့ အိမ်လည်ရှိ ထမင်းစားခန်းသုို့ ကူးကာ ထမင်းစားပွဲသုို့ ဝင်ထုိုင်၍ ရေနွေးဓာတ်ဗူးထဲမှ ရေနွေးကြမ်းကုိုငှဲ့ သောက်လုိုက် သူ့လက်ထဲမှ ဆေးပေါ့လိပ်တုိုကုို မီးညှိရှိုက်ဖွာလုိုက်နှင့် အိမ်နောက်ဖေးတွင် ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်နေသော အမေ့ကုို လှမ်းကာ သူ၏ ကမ္ဘာရေးရာ၊ မြန်မာ့ရေးရာများကုို ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်မည်။
စိတ္တဇဝေဒနာရှင်တုို့ရဲ့ထုံးစံအတုိုင်း ပြောနေရင်း အမြီးအမှောက်မတည့် ရှေ့နောက်မညီဖြစ်လာလျှင် အမေက သူ့ကုို မောင်ငယ်တယောက်သဖွယ် နောက်ပြောင်ကျီစယ်နှုတ်လှန်ထုိုးရင်း သူ့သောက်နေသော ရေနွေးဓာတ်ဗူးထဲသုို့ ရေနွေးထပ်ဖြည့်ပေးမည်။
….ဒီနေ့ အိမ်မှာ ငါ့အဘုိုးကြီးက ဘလုိုင်းကြီး ငါ့ကုို ပြသနာရှာတယ်ကွာ။ အဲဒါကြောင့်.. ။ အရင်က ငါက အနန္တောအနန္တငါးပါး စိတ်တာ။ ဒီနေ့ အဘုိုးကြီးနဲ့ ကွိုင်တက်လာလုို့ တပါးလျော့ ပြီး အနန္တောအန္တလေးပါးပဲ စိတ်တဲ့အနေတဲ့ ပုတီးကုို တလုံးလျော့စိတ်တာကွ…
ထမင်းစားချိန်တုိုင်လျှင် သူ့မိဘများနေအိမ်သုို့ ပြန်ထမင်းစားကာ သူစိတ်ဦးတည်ရာ အရပ်တကာသုို့ ခြေဦးတည့်ရာလှည့်လည်မည်။ သုို့မဟုတ်လျှင်လည်း သူ၏ ပါးစပ်ရေဒီယုိုခလုတ်ကုို ဗြုန်းစားကြီး ပိတ်ကာ ကျနော်တုို့အိမ်နောက်ဖေးမှ ဆင်း၍ တဖက်ခြံထဲက သစ်ပင်တပင်၏ အရိပ်အောက် ဒါမှမဟုတ် ကျနော်တုို့တခြံကျော် တုိုက်ကြီးကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲရှိ ဇရပ်ကြီးတွင် သွားထုိုင်မည်။
( ရေနွေးကြမ်းလောက် ကြံသကာ လောက်နှင့် သူအနှစ်သက်ဆုံး လဘက်ရည်နှင့်ဆေးပေါ့လိပ်မှ လွဲ၍ ဘယ်သောအခါမှမည်သူ့အိမ်ကမှ ထမင်းခေါ်ကျွေး၍မရ။)
နှစ်တနှစ်အရောက်တွင်တော့ ထုိုသူ့လက်ထဲသုို့ စိတ်ပုတီးတကုံး ရောက်လာပါသည်။
သူ့၏နှုတ်ကမူ တလှုပ်လှုပ်နဲ့ ဘာတွေရွတ်ဆုိုနေသည် မသိ ။ လဘက်ရည်ဆုိုင်ထုိုင်ရင်လည်း ထုိုပုတီးနှင့်..၊ သုို့သော်လည်း သူ့နုိုင်ငံရေးသိပ္ဗံကုို စိတ်အားထက်သန်စွာဆွေးနွေးနေချိန်နှင့် ကမ္ဘာ့ရေးမြန်မာ့ရေး သတင်းများအလယ် သူနစ်မြှပ်နေချိန်များတွင်တော့ သူ့စိတ်ပုတီးသည် စားပွဲခုံအောက် သူ့ခြေထောက်နားတွင် ပြုတ်ကျလျက် …။ မြင်တွေ့သူ ကျနော်တုို့တယောက်ယောက်က ကောက်ယူကာ စားပွဲပေါ်သုို့ ပြန်တင်ပေးထားရ တတ်ပါသည်။
ကျောင်းပိတ်ရက်နေ့လည် တနေ့ခင်း ကျနော်တုို့ညီအကုို တသုိုက် မျိုးကုို တုို့အိမ်တွင် ထုိုကာလက ထွက်ခါစ ခုိုင်ထူးရဲ့ မကျေနပ်ဘူးသိလား.. သီချင်းတိတ်ခွေကုို စုဝေးနားထောင်နေခုိုက် ပုတီးတကုံးနဲ့ သူရောက်ရှိလာကာ နေရာလွတ် ခုံတန်းလျားတခုတွင် ဝင်ထုိုင်ရင်း ကျနော်တုို့ ညီအကုိုတသုိုက်နဲ့အတူ အကြင်နာသစ်ဆု… အကြင်နာသစ်ဆု… ကုို ဝင်တောင်းရမ်းရင်း ပုတီးစိတ်နေပါသည်။ ထုိုစဉ် ဘယ်အချိန် ကာလတည်းက သူ့ပုတီးစိတ်နည်းကုို စပ်စပ်စုစု လေ့လာထားသည် မသိသော ကျနော့်အကုိုအောင်ကုိုကြီးက
ကုို(….) ခင်ဗျားစိတ်တဲ့ပုတီးက ဒီနေ့ဘာလုို့ တလုံးလျော့နေရတာလည်း ဟူ၍ အမေးအမြန်းထထူပါတော့သည်။
သူကတော့ သူ့ကုိုယ်ပုိုင် အေးဆေးလေးလံသော လေသံဖြင့်…
….ဒီနေ့ အိမ်မှာ ငါ့အဘုိုးကြီးက ဘလုိုင်းကြီး ငါ့ကုို ပြသနာရှာတယ်ကွာ။ အဲဒါကြောင့်.. ။ အရင်က ငါက အနန္တောအနန္တငါးပါး စိတ်တာ။ ဒီနေ့ အဘုိုးကြီးနဲ့ ကွိုင်တက်လာလုို့ တပါးလျော့ ပြီး အနန္တောအန္တလေးပါးပဲ စိတ်တဲ့အနေတဲ့ ပုတီးကုို တလုံးလျော့စိတ်တာကွ… ဟူ၏။
(သူက ပုတီးစိတ်လျှင် သူတပါးတွေလုို တလုံးချင်းမစိတ်ဘဲ တခါတည်း ငါးလုံးဆွဲ၍ စိတ်ပါသည်)
ထုိုနေ့တွင်တော့ တခါစိတ်လျှင် ပုတီးလေးလုံးသာ အတိအကျဆွဲ၍ စိတ်နေပါတော့သည်။
သူကား သူ့သီအုိုရမ် သူထုတ်ကာ သူ့ခုိုင်လုံမှုအပြည့်နဲ့သူ..။
တခါတွင်လည်း ဘယ်သူက လဘက်ရည်ဆုိုင်ကုို အရင်စရောက်၍ ဘယ်သူ့က ဘယ်သူ့ဝုိုင်းဝင်ထုိုင်နေမိတယ် မမှတ်မိတော့..။ ထုိုသူနှင့်ကျနော် နှစ်ယောက်တည်း လဘက်ရည်ဆုိုင်စားပွဲတခုမှာ နှစ်ယောက်အတူထုိုင်လျက်..။ သူကား ကျနော့်ကုို လုံးဝစကားမပြော လှည့်မကြည့် သူ့အတွေးနဲ့သူတုိုင်းပြုပြည်ပြု အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကုိုရေးဆွဲလျက်..။
ကျနော်ကလည်း သူတိတ်ဆိတ်နေတော့ ကုိုယ်ဘာကုိုယ် နားအေးပါးအေး
…. ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ မူမမှန်ခြင်းကုို ဆင်သလုိုလုို ထင်ကြတယ် ထင်တာတွေ မထင်မရှားနဲ့ မုိုးရယ် ဘယ်ဆီမှာညိုဦးမယ်…ဟု
ဆင်ရာတိမ်မုိုးနေခုိုက် ရုတ်တရက်ကြီး ထကာ….
..ရှုပ်တယ်ကွာ ဇော်ကြီး…။ တုို့တုိုင်းပြည်က သေးသေးလေး မင်းမြေပုံ ပြန်ကြည့်ကြည့်။ လူမျိုးက ဘယ်နှမျိုးမှန်းတောင် ရေလုို့မရ.. ။ တုို့တုိုင်းပြည်မှာ တုိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တတ်တဲ့ကောင်ကလည်း တယောက်မှ မရှိ။ ဥပမာ ဖဆဖလခေတ်ကုို ကြည့်ကွာ။ အဲဒီတော့ ငါတုို့ တုိုးတက်တဲ့နုိုင်ငံတခုက အစုိုးရလုပ်တတ်တဲ့သူတွေကုို လစာကောင်းကောင်းပေး ငှားပြီး တုိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခုိုင်းမယ်။ သူတုို့ကောင်းကောင်းမအုပ်ချုပ်တတ်ရင် အစုိုးရအလုပ်က အချိန်မရွေး ဖြုတ်ပစ်ပြီး နောက်ထပ် အရည်အချင်းပြည့်ဝသူကုို ခန့်ထားမယ် ။ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းပဲဟာ ။ အဲလုိုဆုို မကောင်းဘူးလား…ဟု သူ့စိတ်ရူးကုို ကောက်ကာငင်ကာ မဲထည့်ခုိုင်းတော့ …၊
အင်း.. ကောင်းသားပဲ..ဆုိုတာကလွဲပြီး ကျနော်မှာ ဘာထပ် ပြောရမယ်မှန်းမသိ..။ သူကတော့ သူ့စိတ်ရူး သူသဘောခွေ့ကာ ပြုံး၍များတောင် နေလုိုက်သေးသည်။
ရိုးမထဲက ရွာ (ကိုသားကြီး)